विश्वमा दैनिक २०० मानिस सर्पको टोकाइले मर्छन् ! - Birgunj Sanjalविश्वमा दैनिक २०० मानिस सर्पको टोकाइले मर्छन् ! - Birgunj Sanjalविश्वमा दैनिक २०० मानिस सर्पको टोकाइले मर्छन् ! - Birgunj Sanjal
विश्वमा दैनिक २०० मानिस सर्पको टोकाइले मर्छन् !
१९ कार्तिक २०७६, मंगलवार ०५:५४
सर्पको टोकाइबाट मात्र विश्वभर दैनिक २०० मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ । विषालु सर्पकै टोकाइबाट चामत्कारिक रुपमा बच्न सफल थाइल्यान्डका ‘फायर फाइटर’ पिन्यो पुकपिन्यो भन्छन्, म सर्पले टोकेको १५ मिनेटमै अस्पताल पुगेको थिएँ जसकारण म बच्न सफल भएको हुँ । पहिले त डाक्टरहरुले मलाई ‘किङ कोब्रा’ ले टोकेको भनेर विश्वास गर्नै सकेका थिएनन् । त्यसपछि मैले म सर्पहरुबारे सिकाउने प्रशिक्षक भएको कुरा बताएँ र वास्तवमै म यिनका प्रजाति राम्ररी पहिचान गर्न सक्छु ।’ त्यसपछि पनि उनले आफ्नो बुढी औँलाबाट मृत सेल निकाल्न दुई महिनासम्म अस्पताल गइरहनुपर्यो भने शल्यक्रिया पनि गराएका थिए ।
बेलायतको वेलकम ट्रस्ट रिसर्च च्यारिटीका अनुसार सर्पको टोकाइले कुनैपनि क्षेत्रीय बिमारीको तुलनामा अत्याधिक मानिसको ज्यान लिनुका साथै अपाङ्गता पनि बढाइरहेको छ । वेल्कमका विज्ञान निर्देशक प्रोफेसर माइक टर्नर भन्छन्, ‘सर्पको टोकाइ वास्तवमा उपचार गर्न मिल्ने किसिमको अवस्था हो । किनकी एन्टि भेनोमको पहुँच हुने हो भने मान्छे जिवित रहने सम्भावना प्रबल हुन्छ । यस्तोमा विषालु सर्पको टोकाइबाट यति धेरै सङ्ख्यामा मानिसको मृत्यु नहुनु पर्ने हो ।’
यसरी एन्टि भेनोम घोडाबाट आउने हुँदा घोडाको प्रोटिन मानिसमा इन्जेक्ट गर्नु जोखिमपूर्ण हुनु स्वभाविक भएको वेल्कमका अर्का वरिष्ठ विशेषज्ञ फिल प्राइस बताउँछन् । उनले भने, ‘यसबाट चिलाउने, पोल्ने जस्ता साधारण असरदेखि ‘एनाफिलेक्सिस’ जस्तो प्राणघातक रियाक्सन हुन सक्छ । त्यसैले एन्टि भेनोम धेरै राम्रो उपचार होइन । किनकी धेरै भेनोम अरु औषधि जसरी वैज्ञानिक रुपमा परीक्षण गरिएका हुँदैनन् ।’
त्यस्तै औषधि उत्पादक कम्पनीहरुका लागि पनि भेनोमको व्यवसाय फाइदाकारक साबित भइरहेको छैन । २०१० मा मात्र सनोफी पास्चरले ‘एफएभी–अफ्रिकी एन्टि भनोम’ को उत्पादन बन्द गराएको थियो जुन विभिन्न अफ्रिकी सर्प विरुद्ध प्रभावकारी साबित हुने गर्दथ्यो । यस्तोमा वेल्कमले प्रस्ताव गरेको नयाँ लगानी रकम युनिभर्सल एन्टिभेनोम उत्पादन गर्ने भनिएको छ । यसका साथै उनीहरुले एन्टि भेनोमको विकल्प खोज्ने र अहिलेको निर्माण तरिकामा समेत अधिक सुधार ल्याउने बताएका छन् ।
विश्वको सबैभन्दा ठूलो किलर अफ्रिका, मध्य पूर्व, भारत र पाकिस्तानमा पाइने ‘स–स्केल्ड भाइपर’ लाई मानिन्छ । त्यसैगरी ‘रसेल्स भाइपर’ पनि अत्यन्तै खतरनाक मानिन्छ जुन भारत लगायत दक्षिणपूर्वी एसिययामा पाइन्छ । वेल्कमका अनुासर हाल विश्वसँग आवश्यक भन्दा आधार कम एन्टिभेनोम रहेको छ । त्यस्तै कतिपय स्थानमा भएका एन्टिभेनोम क्षेत्रमा आधारित हुने हुँदा सबै अवस्थामा प्रभावकारी नहुने बताइएको छ । यसरी विश्वका केबल ६० प्रतिशत विषालु सर्प विरुद्धका मात्र एन्टि भनोम उत्पादन भएका छन् । विशेषगरी अफ्रिकामा यो समस्या व्यापक बन्दै गएको छ किनकी त्यहाँ ९० प्रतिशत एन्टि भेनोमले काम गर्दैन भने उपलब्ध भएमा पनि अत्याधिक महङ्गो हुने गर्दछ । तर सर्प टोकाइको शिकार हुने पीडितहरु प्रायः गरिब घरबाट आउने गरेका छन् । २०१३ को एक अध्ययन अनुसार भारतमा सर्प टोकाइका ४० प्रतिशत पीडित उपचारका लागि ऋण लिन बाध्य हुने गरेका छन् ।
त्यसैले पनि विश्व स्वास्थ्य संगठनले स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने र दुर्गम क्षेत्रहरुमा यसको रोकथामका लागि शिक्षाका अभियान चलाउनेप्रति पनि ध्यान दिइने बताएको छ । साथै समुदायमा सबैलाई विषालु सर्पका प्रजाति चिनाइने र व्यवहारिक परिवर्तन ल्याउनमा जोड दिने बताएको छ जस्तै चप्पल जुत्ता लगाउने । सिएनएनबाट